Amathempeli amade noma amafushane? Thola ukuthi iziphi ezizokufanela kangcono | Amadoda aSitayela
Hlobo luni lwama-sideburns akwenza uthandeke ngokwengeziwe?
UMiguel Serrano | | Kugundiwe, Ukunakekelwa komuntu siqu
Kuyamangalisa amandla ukuthi into ebonakala ingabalulekile njengama-sideburns inawo uma kukhulunywa ngokwenza ubuso bethu buhehe kancane emehlweni abantu. Njengasekhanda, ukwakheka okuhle nokuthopha kakhulu kwama-sideburns kufanele kumakwe ngokuma kobuso bethu, hhayi ukuthanda kwethu, njengoba kuvame ukwenzeka. Qala ngokuzibuka esibukweni ngokucophelela nangendlela efanele. Ngabe ucabanga ukuthi ubuso bakho bumise okweqanda noma buhlangene?
Khulisa ukushisa okusemaceleni kuze kweqe maphakathi nendlebe uma ubuso bakho buseqanda, njengoba kwenza uNiall Horan. Lokhu kuzosiza ukuvumelanisa ukuma kobuso bakho, ngoba uma ubude bensimbi eseceleni, ubuso bakho buzoncipha. Thola ubude bakho obufanele phakathi kwaphakathi kwendlebe ne-lobe. Yehlisa i-lobe, cha, ngaphandle kokuthi ushutha i-movie yesikhathi noma useqenjini le-rockabilly.
Amadoda anobuso obude kufanele enze amafisholo asemaceleni abe mafushane uma ufuna ukwenza ukwakheka kobuso bakho bujabulise iso. Futhi, zimfushane, ubuso bakho buzovela bube banzi. Kepha khumbula, ungalokothi uphuce lonke ithempeli, ngoba lokho kuzodala umphumela ongajwayelekile futhi ongathandeki. Kopisha u-Olly Alexander bese ushiya okungenani uhhafu we-intshi. Kuyinto eyodwa ukuba nama-sideburns amafushane futhi kungenye into, hhayi ukuba ne-sideburns.
Uma ucabanga ukuthi ukuma kobuso bakho kuyavumelana, okusho ukuthi, okusaqanda kakhulu noma okude kakhulu, into yokuqala ukubonga abazali bakho ngokudlulisa imininingwane emihle kangaka yofuzo kuwe. Amahlaya eceleni, sikucebisa ukuthi ukhethe ubude obujwayelekile (uhhafu wezindlebe), imilimitha phezulu, imilimitha phansi, yize kunjalo, abantu abanesimo sobuso esihle bathanda noma yisiphi isitayela se-sideburns.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Kugundiwe » Hlobo luni lwama-sideburns akwenza uthandeke ngokwengeziwe?
UVarela osondelene naye kusho
Siyabonga ngamathiphu !! Sanibonani
Phendula ku-Varela Obuseduze
Ukulutha kwezithombe zobulili ezingcolile nemiphumela yako
Intshebe yamanga yamadoda esimanje